ထူးခြားအံ့ဘွယ်သတင်း | asnthanhan's Blog
Posted by asnthanhan under ထူးခြားအံ့ဘွယ်သတင်း, အထူးသတင်း
နေပြည်တော်ရှိ တောတွင်းတစ်နေရာတွင် ဆံတော် ရှင်ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားနှင့်ပုံစံတူသော ထူးခြား အံ့ဘွယ် ကျောက်တုံးကြီး သတင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်သို့ ယခုရက် ပိုင်းအတွင်း စတင်နာမည်ကြီးလာပါသည်။ နေပြည် တော်နှင့် အတော် လှမ်းသော ရွှေပြည်သာ ရွာတွင်ရှိ သည်ဟုကြားသိရသည်။
အဆိုပါထူးခြား ကျောက်တုံးကြီးမှာ နေပြည်တော် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မြို့လေးများသို့ပါ အချိန်တိုအတွင်း ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့ပြီးနေ့စဉ်ဘုရားဖူးလာရောက်သူများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိနေကြောင်းကြားသိရချိန်တွင် မြန်မာ ပို့စ်သတင်း ဂျာနယ်ပရိသတ် အတွက် အဆိုပါကျောက် တုံးကြီးရှိရာ ဒေသသို့ သွားရောက် ကွင်းဆင်းလေ့လာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့မှ အဆိုပါ ရွှေပြည်သာ ရွာသို့ မည်သို့ မည်ပုံ သွားရောက်ရသည်ကို ပထမဦးစွာ စုံစမ်း ရသည်။ အိုင်တီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သို့ရောက်ရှိ လာသော နေပြည်တော် တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိ သည့်ရဲမှူးကြီး တစ်ဦးကို စတင်မေးမြန်းရပါ သည်။ အဆိုပါ ရဲမှူးကြီးထံမှ တစ်ဆင့် ထိုသတင်း တိကျ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုချက် ရရှိပြီးနောက် အဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီး တည်ရှိရာသို့ အိပ်မက်အရ လမ်းကြောင်း သိရှိပြီး သွားရောက် ရှာဖွေခဲ့သော ဆရာတော်နှင့် ဆရာတော်၏ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမ များထံ ဆက်သွယ် စုံစမ်းခြင်း၊မေးမြန်းခြင်း များပြုလုပ် ပြီးနောက် အဆိုပါ ရွှေပြည်သာရွာသို့ မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ် အဖွဲ့ခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။
အချို့က ဒီနေ့နေ့ချင်းပြန် ခရီးကအဆင်မပြေနိုင်၊ နောက်တစ်နေ့မှ ခရီးထွက်ရန်ပြောသည်။ ယခု ၁၀ နာရီကျော် နေပြီဖြစ်၍ခရီးထွက်ရန် အဆင်မပြေနိုင်၊ မြစ်ကိုဖြတ်ကူး၍ သွားရသော လမ်းမှဆိုလျင် မြန်နိုင် ကြောင်း လည်း ၀ိုင်းဝန်းအကြံပြုကြသည်။
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့အထိမ်း အမှတ်တစ်ခု ဖြစ်သော ဆင်ရုပ်မှတ်တိုင် အနီးရှိအိုင်တီ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်မှ စတင်၍ အဆိုပါ ခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ ရသည်။ မည် သို့ပင်ဖြစ်စေ အဆိုပါ ခရီးစဉ်ကို မရောက်ရောက် အောင် သွားရမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နေ့ချင်းပြန် ခရီးစဉ် စတင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ရသည်။
အသွားလမ်းမှာ မိုးရာသီဖြစ်၍ အလွန်ပင်ကြမ်း တမ်းသည်။ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားများက ပေါင်း လောင်း ရေလွှဲဆည်အထိသာလိုက်ပို့၍ ရမည်။ ကျန် သော ခရီးလမ်းကို ခြေလျှင် ချီတက်မှရမည်ဟု ဆိုပါ သည်။ အနီးဆုံး နေရာသို့ လိုက်ပို့ပေးရန် ညှိနှိုင်းကြပြီး နောက် ခရီးထွက် ခဲ့သည်။ နာမည်ကျော် ပျဉ်းမနား သကြားစက် ကိုကျော်လွန်ပြီးသည့် နောက် အတော် လေးကိုမောင်းပြီးမှ ပေါင်းလောင်း သို့ရောက်သည်။ ကျန်သော ခရီးစဉ်အတွက်ကိုမူ နေပြည်တော် ဒေသခံ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားများက သူတို့လည်း အဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီး ဆီသို့မသွားရသေး ဖူးမြော်ချင်သည်ဟု ဆိုကာ ဆက်လက် လိုက်ပါပို့ဆောင် ပေးသည်။ ခရီး လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား တို့အတွက် အလွန်ပင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်း သော်လည်း မရရအောင် လို့ပို့ပေးကြ သည်။ အမှန်တကယ်တွင် အဆိုပါ ကယ်ရီသမားတို့ အပင်ပမ်းခံ လိုက်မပို့ပါက ညမိုးချုပ်သည့် တိုင်အောင် ကျောက်တုံးကြီးဆီသို့ ရောက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျေး ဇူးများ စွာတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။
ဘုရားတောင်ခြေနှင့် အတော် နီးသောနေရာ အထိ လိုက်ပို့ကြပြီး နောက်တော လမ်းခရီးကိုဆက်ခဲ့ သည်။ နံနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်မှ စတင်ကာ ခရီး ဆက် ခဲ့သော အဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီးခရီးစဉ်မှာ မွန်း လွဲ ၁ နာရီဝန်းကျင် တွင်အဆုံးသတ် ခဲ့ပြီးနောက် ရောက် ရှိခဲ့ လေတော့သည်။
ဘုရားဝန်း ကျင်တွင် လာရောက် ဖူးမြော်သူများ လည်းရှိ နေသည်။ တောင်ပေါ် အတက်တွင်လည်းပြန် ဆင်းသွားကြသူ တို့နှင့်လည်းဆုံ တွေ့ခဲ့ရသည်။
ကျောက်တုံးကြီးမှာ ကား အမှန်တကယ်ပင် ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးသို့သွား ရောက်ရာ ခရီးစဉ်နှင့် ဆင်ဆင်တူ သကဲ့သို့ ကျောက်တုံးကြီး အနေအထားမှာ လည်း ပုံတွင်မြင်တွေ့ရသည့် အတိုင်း များစွာ ဆင်တူ နေပါသည်။ ကျောက်တုံးကြီး ပတ်ပတ်လည်တွင် ဘုရား ဖူးသူတို့ရောက်ရှိနေပါသည်။
ဒေသခံရွာ သား ကိုဖိုးပြားက အဆိုပါ ကျောက်တုံး ကြီးအနီးရှိ ထူးခြားချက်များကို လိုက်လံပြသ ပါသည်။အနီးနားရှိအခြား သော အရံ ကျောက်တုံးကြီးများပေါ် တွင် လူကြီးတစ်ဦး ၏ခြေရာ ထက်ပင်ကြီးနိုင်သော ခြေရာကြီး တစ်ခုနှင့် ကလေးငယ် တစ်ဦး၏ခြေရာတို့ကို လိုက်လံပြသ ပေးသည်။ ယင်းအရံ ကျောက်တုံးကြီးပေါ် တွင်ပင် တစ်စုံတစ်ခုသော မှတ်သားထားသည့် အရာတို့ ရှိနေပြန်သေးသည်။
“ဒီအမှတ်အသားကတော့ သဘာဝအတိုင်းပေါ် ပေါက်နေတာ မဟုတ် လောက်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ် ယောက် က မှတ်သားထား တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ရေးထားတာ ကလည်း ဘာစာ လည်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။ သမိုင်းကို လေ့လာတဲ့သူ၊ ရှေးဟောင်း စာပေတတ် ကျွမ်းတဲ့သူတွေ လာပြီးလေ့လာနိုင်ရင် တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ” ဟု ဒေသခံရွာသား ကိုဖိုးပြား ကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒီဒေသခံတွေအနေနဲ့ ဒီကျောက် တုံးကြီးကို အားစမ်း တဲ့အနေနဲ့ တွန်းချကြသေးတယ်။ ဘယ်လိုမှ မကျဘူး။ တည်နေပုံ ကလည်းထူးခြားတယ်။ တွန်းချတယ် ဆိုတာတောင် ဒီအတိုင်း လူချည်း သက် သက်အားနဲ့တွန်းချတာ မျိုးမဟုတ်ဘူး၊ ကုတ်နဲ့ ကော် ချတာ။ ကုတ်နဲ့ ကော်တယ်ဆိုတာက ကုတ်တစ်ချောင်း ကို လူငါးယောက် အားနဲ့ညီမျှတယ်ဗျ။ သုံးယောက် ပေါင်း ဆိုတော့ လူဆယ့်ငါးယောက် အားလောက် ရှိတယ်။ ကျောက်တုံးကြီး ဆိုတာ ယမ်းခါ နေပေမယ့် ဘယ်လိုမှ ပြုတ် မကျသွားဘူး” ဟုကိုဖိုးပြားက ဆက် လက် ပြောပြသည်။
လူသူ အရောက်အပေါက်နည်းသော အဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီး တည်ရှိရာနေရာ သွားရာလမ်းကို ကျိုက် ထီးရိုးဘုရား လမ်းဟု သာခေါ်ဆိုကြကြောင်း ရွာခံများ ကပြောသည်။ ကျောက်တုံးကြီးနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း တွင် စမ်းချောင်းငယ် တစ်ခု၏ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေသံကို လည်း ကြားရ သဖြင့်သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါသည်။ ကြည်လင်အေးမြသော စမ်းရေကြောင့် ပင်ပမ်းမှုအား လုံးပြေ ပျောက်သွားရသကဲ့ သို့ခံစားရသည်။
အဆိုပါ ထူးခြားဆန်းပြားသော ကျောက်တုံးကြီး သတင်းမှာ နေပြည်တော် ၀န်းကျင်တွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး ယခုအခါ အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများမှသူများ နေ့စဉ် လာရောက်ဖူးမြော် ကြကြောင်း၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့များတွင် အဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီးကြီးဆီသို့ လာ ရောက်လေ့လာ သူများအဆင်ပြေစေရန် ကားတစ်ချို့ ပြေးဆွဲ ပေးနေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကျောက်တုံးကြီး ၏ နာမည်သတင်း ကျော်ဇောမှု ကြောင့် ယခုအခါ တွင်သက်ဆိုင်ရာ မှစာတစ်စောင် ရောက်ရှိ လာပြီး အဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီးကို နဂိုမူလ အတိုင်း ထိမ်းသိမ်းပေးထား ရန်နှင့် စေတီဘုရား တည် ခြင်းအမှု တို့ကို လူကြီးများ ကိုယ်တိုင် လာရောက်စစ် ဆေးပြီး စေတီ ဘုရား တည်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား စာပို့ထားသည်ဟုသိရသည်။
“ ကျွန်တော် တို့ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကလာစစ် ဆေးမယ်၊ ဘာမှ မပြုမပြင်ဘဲ ထားရှိပေးရမယ် ဆိုတော့ အခုဘုရား တည်မယ့် ကျောက်တုံးကြီး ပတ်ပတ်လည်မှာ ရွှေချဖို့ အတွက် ခံဆေး သုတ်ထားတာ ကိုရပ်ထားပါ တယ်။ လာတဲ့သူတွေ ကများများလာတာ ကြောင့် ကျွန် တော်တို့ရှိ တဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ လာရောက် တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေအောင် လမ်းပြင်ပေးတာတွေ၊ လမ်းညွှန် ဆိုင်း ဘုတ်တွေ လမ်းဆုံ လမ်းခွတွေမှာ လိုက်ပြီး စိုက်ထားပေး တာတွေ ကိုတော့လုပ်ပေး ပါတယ်။ ဘုရား တည်တာက တော့ ဒီဝါကျွတ်ပြီး သီတင်းကျွတ် ရောက်ရင်တော့ တည်ဖြစ်မယ် လို့မျှော်လင့်ထား ပါတယ်” ဟုအဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီး တည်ရှိရာအနီးမှ ဒေသခံရွာ ရွှေပြည် အေးကျေးရွာ ၊ ဘာသာရေးနှင့်လူမှုရေး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့် ဟန်က ပြောကြားသည်။
ထူးခြားဆန်းပြားပြီး အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းသော၊ မမြင်ရ သော်လည်း လူပြော သူပြောများနေသည့် ထူး ခြား ဆန်းပြားမှုမျိုးစုံရှိနေသည့် အဆိုပါကျောက်တုံးကြီး ပေါ်တွင်အမြန်ဆုံး ဘုရားတည်နိုင် စေရန်ကိုမူ ဒေသခံ ရွာသူ ရွာသားများ၊ အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်ရွာများမှ လာရောက် ဖူးမြော် လေ့လာကြသူတို့က မျှော်လင့် လျက် ရှိနေကြပါသည်။ မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ်အဖွဲ့အနေ ဖြင့်လည်း မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကာမူ ထူးခြား ဆန်းပြား သော အဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီးဆီသို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရောက်ရှိ ခဲ့ချိန်တွင် လွန်စွာမှ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာဖြစ် ရပြီး၊ စာဖတ်ပရိသတ် တို့ထံ အချိန်မီ တင်ပြခွင့်ရရှိသည် ကို ပိုမို၍ ပီတိဖြစ်ရပါသည်။
အဆိုပါ ကျောက်တုံးကြီး ပေါ်တွင် စေတီဘုရား တည်ခွင့်ကို ထူးခြားသော အိပ်မက်အရ လမ်းကြောင်း ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သော ဆရာတော်နှင့် တပည့်၊ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမများ တည်ထား ခွင့်ရမည်လား၊ နိုင်ငံတော်မှ ဦးစီး ဦးဆောင်ပြု၍ တည်ထား ကိုးကွယ်မည် လားဆို သည်ကိုမူ မည်သူမျှ မသိရှိရသေးပါ။
လာမည့် သီတင်းကျွတ် ကာလအရောက်တွင် ယခု ကတည်း ကနာမည်ကျော်ကြား နေသော ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုး ပုံစံတူကျောက်တုံးကြီး ပေါ်၌ စေတီတော် တစ်ဆူ ပေါ်ထွန်းလာ တော့မည်ဟု မျှော်လင့် ရပါသည်။
ကျောက်တုံးကကျောက်တုံးပါပဲ..ဘုရားတည်ထားမှသာ ဖူးမြော်သင့်တယ်…ဒါကိုပဲ လူတွေကမစဉ်းစား မဆင်ခြင်ပဲ ဘုရားဖူးသွားတယ်ဆိုတာ တော်တော်အံ့သြောတယ်..ထူးဆန်းတိုင်းသာထိုင်ရှိခိုးရ ရင်ခက်ရချည်ရဲ့ ….ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးတာ စေတီ ပုထိုး ဘုရားရှိလို့ ဖူးမြော်တာပါ…
Rock Steady: The World’s 10 Most Amazing Balanced Stones
from Leo Imanov
I just wonder if you’d be able to find out — is it real? Someone sent me the picture as an attachment. He wrote that the stone wanted to follow the prophet Muhammad s.a.w. ascending to the heaven. The picture is unbelievable!Does anyone have any more information about this photo? Is the phenomenon real? A Photoshop fake? An optical illusion? Send any information you have. — S.W
စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရွာကလေး အနာဂတ် မသေချာမရေရာတော့
Posted by asnthanhan under ထူးခြားအံ့ဘွယ်သတင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်, အထူးသတင်း
(အေအက်ဖ်ပီ)-ဇော်ဝင်း ဘာသာပြန်သည်။ -အတွဲ ၂၆ ၊ အမှတ် ၅၁၀ (၁၈ – ၂၄ ၊ ၃ ၊ ၂၀၁၁)
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တစ်ခုတည်းကျန်နေခဲ့သော ရွာကလေးမှ အိမ်ရှင်မစ္စဟောင်ကို ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န
၀ါရီလအတွင်းက သူ့ခြံ အတွင်းတွေ့ရစဉ်။
တိုက်ခန်းမြင့်ကြီးတွေအကြားက ထောင့်တစ် ထောင့်မှာ တိတ်တိတ်ဆိတ် ဆိတ်နဲ့ တစ်ထပ်အိမ်
တန်းလေးတွေဟာ ကျေးလက်ဆန်ဆန်နဲ့ စင်ကာပူ မြို့ကြီးပေါ်မှာ ရှိနေတယ်။
ခွေးတွေ ကြောင်တွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြေးလွှားနေပြီး ကြက်တွေ ကလည်း ဆူညံနေတယ်။
ကလေးတွေကတော့ မလှမ်းမကမ်းက ကားလမ်းမကြီးက ကားတွေရဲ့ ရန်က အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်းနဲ့ ရောင်စုံသွပ်မိုးပျဉ်ကာ အိမ်လေး တွေကြားမှာ ကစားနေကြတယ်။
စင်ကာပူမြို့ကြီးပေါ်မှာ နောက်ဆုံး ကျန်နေသေးတဲ့ ကန်ပွန်လော် ရွန်ဘွမ်ကောက်ကနေကြိုဆိုပါတယ်။
အချိန်ကသိပ်မကျန်တော့ပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာက အတင်းမရွှေ့ပြောင်း ခိုင်းသေးခင်အထိတော့ ဒီရွာလေးဟာ အာရှရဲ့ခေတ်အမီဆုံးနဲ့အကြွယ်ဝဆုံး ဖြစ်မလာခင် ဟိုး ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များဆီက စင်ကာပူရဲ့ ပုံရိပ်အကြောင်း ပြောပြနေဦးမှာပါ။
စင်ကာပူမြောက်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးက ဘောလုံးကွင်းသုံးကွင်းစာလောက်ရှိတဲ့ ဒီရွာလေးမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အိမ်ပေါင်း ၂၈ အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ ၅၀ ရှိပါတယ်။ ကတ္တရာလမ်း ခင်းမထားဘဲ ဥယျာဉ်ခြံ ကျယ်ကြီးတွေ၊ မြက်ခင်းစပ်တွေ၊ ရာသီပေါ် ငှက်ပျောပင်အုပ် တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ဒီနေရာလေးဟာ မိုးထိတိုက်ခန်းကြီးတွေ၊ ရုံးခန်းမျှော်စင်ကြီးတွေနဲ့ ရှော့ပင်း မောကြီးတွေနဲ့ ပနံရနေတဲ့ မြို့နိုင်ငံ လေးကို ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတယ်။
ရွာခံတွေအတွက်ကတော့ တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းသိမ်းလို့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေရှိတဲ့ အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်တဲ့ နေရာလေးပါ။ သူ့ကိုယ်မသိ၊ ကိုယ့်သူမသိတဲ့ မြို့ပြနေ ထိုင်မှုနဲ့အတော်ကွာပါတယ်။
“အိမ်နီးချင်းတွေကို ကျွန်မတော်တော် သံယောဇဉ်ဖြစ်မိပါတယ်”လို့ အသက် ၅၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အပျိုကြီး ဟောင်က ပြောပါတယ်။
သူဟာ တစ်လကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၅၀ ကနေ ၃၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ ကနေ ၂၃) နဲ့အိမ်ငှားစားတဲ့သူပါ။ စင်ကာပူဟာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်မှာရှိစဉ် ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့မိသားစုဟာ ဒီဒေသလေးကို ပြောင်းလာခဲ့တာပါ။ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ရေ တောင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကျမှ ဒီရွာလေးကို ရောက်ခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းကျ ဒီရွာလေးမှာ တရုတ်နဲ့ မလေးမိသားစုတွေ ရောနှောနေထိုင်လာကြတယ်။ အိမ်လေးတွေက တစ်အိမ် နဲ့ တစ်အိမ် ၁၆ ပေခွဲကွာကြတယ်။
“ဒီရွာမှာ အတူတူနေကြတဲ့ သူတွေကတော့ ဆွေမျိုးရင်းချာတွေလိုပါပဲ။ တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ မလေးဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမထူးပါဘူး”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
စင်ကာပူရဲ့စံအရ ဒီရွာလေးမှာ စူပါ မားကက်ကြီးတွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ ကားနဲ့ ရထားဂိတ်တွေနဲ့ဝေးလွန်းလှတာကြောင့် ရွာခံလူတွေဟာ ဘာမှဟုတ် ဟုတ်ညားညား မျှော်လင့်ကြတာမှ မဟုတ်တာ။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်ကတည်းက ရွာလေးမှာ နေထိုင်လာတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင် ဂျမေးလ်ဟာ ရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့ ကျေးလက်သဘာဝကို သဘောကျနေတယ်။
“ဒီကလူတွေက အရမ်းဖော်ရွေ ကြတယ်၊ မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ အရမ်းလွယ်တယ်”လို့ သူကပြောပါတယ်။
အဆောက်အအုံဟောင်းကြီးတွေကို ခေတ်မီအိမ်ရာတွေအဖြစ် ပြောင်းနေ ပြီး မြေနေရာရှားပါးတဲ့ စင်ကာပူမှာ ဒီရွာလေးရဲ့အနာဂတ် ကလည်း မရေရာပါဘူး။ တချို့မြို့ကျောင်းတွေဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ကျေးလက်ဓလေ့ကို လေ့လာဖို့ ဒီရွာကို ပျော်ပွဲစား ခရီး ထွက်လာတတ်ကြတယ်။
ဒီရွာလေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ စင်ကာပူမြို့ပြပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့က ပြောထားပေမယ့် အချိန်အတိအကျ မဖော်ပြသေးပါဘူး။
အ​မေရိကန်နိုင်ငံမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ​သည် အမျိုး​သား​များ​ အသုံး​ပြုနိုင်မည့်​ သ​န္ဓေတား​ဆေး​ တစ်မျိုး​ကို စမ်း​သပ်တီထွင်​
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော အမျိုးသမီးငယ်များက အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး ဖေါက်သည် ရှာဖွေမှုများ တိုးမြှင့် လုပ်ကိုင်လာ...
ဂျပန် ဆူနာမီ ကယ်လီဖိုးနီးယားအထိ ရိုက်ခတ်